३ र्‍याक डीएपी मल भित्रियो- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार
३ र्‍याक डीएपी मल भित्रियो
भाद्र १५, २०७६ शंकर आचार्य
(पर्सा) — डिएपी मलको चरम अभाव झेलिरहेका बेला सातायता कृषि सामग्री कम्पनीको ३ र्‍याक डिएपी मल वीरगन्ज भन्सारबाट नेपाल भित्र्याएको छ ।
कम्पनी वीरगन्ज क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख गोविन्द पराजुलीका अनुसार भदौ ७ गते पहिलो, बिहीबार दोस्रो र तेस्रो गरी २ र्‍याक वीरगन्जस्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह आइपुगेको हो ।
भारतको विशाखापटनम बन्दरगाहबाट मल बोकेका यी रेल र्‍याक आइपुगेका हुन् । भारतकै इन्डियन पोटास लिमिटेड मलको यो कन्साइन्मेन्टको सप्लायर रहेको छ । पराजुलीका अनुसार थप अर्को रेल र्‍याक डिएपी मल लिएर सोमबार वा मंगलबारसम्म वीरगन्ज आइपुग्नेछ ।
कम्पनी क्षेत्रीय कार्यालय भैरहवाका लागि आएको एक र्‍याक डिएपी मल बिहीबार नै भैरहवा नजिकको भारतीय रेल्वे स्टेसन नौतनवा आइपुगेको छ । एक रेल्वे र्‍याकले २ हजार ५ सय मेटन मल बोक्छ । कुल २५ हजार मेटन डिएपी मल आयातको यो सम्झौता अन्तर्गत १० हजार मेटन मल वीरगन्ज क्षेत्रीय कार्यालय, ९ हजार मेटन भैरहवा क्षेत्रीय कार्यालय र ६ हजार मेटन विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयले पाउनेछ । वीरगन्ज कार्यालयको आधा मल आइसकेको छ । बिहीबार आएको दोस्रो र्‍याकमध्ये आधा विराटनगर जानेछ । अब आउने चौथो र्‍याक मल पूरै विराटनगर जानेछ ।
पहिलो र दोस्रो र्‍याकमा आएको डिएपी मल वीरगन्ज क्षेत्रीय कार्यालय मातहतका वीरगन्ज समेत जनकपुर, हेटौंडा, त्रिशुली, कावासोती, भरतपुर, धुलिखेल, काठमाडौं, गजुरी, कलैया, सर्लाही, चन्द्रपुर, सिन्धुली, दमौली लगायतका कार्यालयमा आवश्यक परिचालन भइसकेको छ ।
मुलुकका अधिकांश जिल्लामा डिएपी मलको अभाव रहेको थियो । धान रोप्ने बेलामा मल नपाउँदा किसान गुणस्तरहीन तथा महँगो भारतीय डिएपी मल खरिद गर्न बाध्य भएका थिए ।
प्रकाशित : भाद्र १५, २०७६ ०९:४२
सुध्रिँदै गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल
भाद्र १५, २०७६ अवधेशकुमार झा
(राजविराज) — रेफरल सेन्टरजस्तै बनेको राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताललाई सुविधासम्पन्न बनाउन थालिएको छ । विशेषज्ञ चिकित्सकको पूर्ति र विभिन्न सेवाको सुचारुसँगै अस्पतालमा सुधारको संकेत देखिएको छ ।
पछिल्लो दुई महिनामा अस्पतालमा मेडिसिन, सर्जरी, पेडियाट्रिक, एनेसथेसिया, नाककान घाँटी, अर्थो, रेडियोलोजी र डेन्टलको विशेषज्ञ सेवा सुरु भएको छ । यी सेवा सुरु हुनु भन्दा अगाडि सामान्य बिरामीलाई पनि विराटनगर वा धरान रेफर गर्ने गरिएको थियो ।
अस्पतालमा पितथैली, हाइड्रोसिल, हर्निया र एपेन्डिक्सको शल्यक्रिया पनि सुरु भएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा चुमनलाल दासले जानकारी दिए । उनका अनुसार अस्पतालमा चाँडै आईसीयु र सिटिस्क्यान सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ । यसका अतिरिक्त डायलासिस सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी पनि अन्तिम चरणमा रहेको दासले जनाए । थाइराइड र मधुमेहको जाँच भने सुरु भइसकेको छ । ‘पछिल्लो समय एडभान्स मेसिनका साथै विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको पदपूर्ति भएपछि बिरामीको चाप बढनुका साथै रेफर गर्ने क्रम पनि घटेको छ,’ मेसु डा. दासले भने ।
विसं २०१३ सालमा पृथ्वी वीर उपचार केन्द्रलाई सप्तरीको हनुमाननगरबाट राजविराज सारिएको थियो । २०२९ सालमा सो उपचार केन्द्रलाई सगरमाथा अञ्चल अस्पतालको नामकरण भई ५० शय्याको अस्पतालका रूपमा स्तरोन्ति भएको थियो । २०६१ साल भदौ २८ गते तात्कालीन श्री ५ को सरकार सचिव स्तरको निर्णयबाट आफ्नै स्रोत र साधनबाट सञ्चालन हुने गरी ५० शय्या थप गरिएको थियो । ४ बिघा १३ कठा ४ धुर जग्गामा फैलिएको अस्पताललाई २०६९ सालमा गजेन्द्र नारायण सिंह सगरमाथा अञ्चल अस्पतालका रूपमा परिणत गरिएको थियो । ‘अहिले १ सय २५ शय्या सञ्चालनमा छ,’ मेसु डा. दासले भने, ‘अहिले ओपिडीमा दैनिक २ सयदेखि २ सय ५० जना सम्म बिरामी आउँछन्, भर्ना हुने बिरामीको संख्या पनि हातै बढेको छ ।’ ‘आईसीयू सेवा सञ्चालन र सिटिस्क्यान सेवाका लागि केही समय लाग्ने भएकाले सो बाहेकका अन्य सेवाका बिरामीलाई रेफर गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनले दाबी गरे ।
विशेषज्ञ चिकित्सकबाहेक मेडिकल अफिसरका लागि राजविराज नगरपालिका र अस्पताल विकास समितिले पनि सहयोग गरेको छ । नगरपालिकाले चारजना र विकास समितिले एकजना गरी पाँच जना मेडिकल अफिसर राखिएको छ । अस्पतालमा चापको आधारमा नर्सिङ स्टाफहरूको आवश्यकता महसुस भएकाले जिल्लाका अन्य स्थानीयतहरू सित समन्वय गरी सोको व्यवस्थापन मिलाउने कार्य भइरहेको मेसु डा. दासले बताए । गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालको सुधारसँगै राजविराजमा रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कार्य पनि अघि बढेको छ । सरकारी घोषणासँगै राजविराज नगरपालिकाले राजविराज १० मा उपलब्ध गराएको ६१ बिघा जग्गामा प्रतिष्ठान बनाउने लक्ष्यका साथ निर्माण पूर्वका कार्य सुरु भएको छ ।
प्रकाशित : भाद्र १५, २०७६ ०९:४१
सीमा सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीमाथि भारतीयद्वारा आक्रमण प्रयास
प्रदेश २ मा शनिबार थपिए ५७ जना संक्रमित
प्रयोगशालाले लिन नमान्दा सप्तरीमै थन्किए २ सय स्वाब नमुना
पर्साका थप २ जनामा कोरोना संक्रमण